को’रोनालाई जित्दै नेपाल, पछिलो २४ घन्टामा यसरी घट्यो संक्रमण! – PathivaraOnline
Home > स्वास्थ्य > को’रोनालाई जित्दै नेपाल, पछिलो २४ घन्टामा यसरी घट्यो संक्रमण!
को’रोनालाई जित्दै नेपाल, पछिलो २४ घन्टामा यसरी घट्यो संक्रमण!
admin September 19, 2021 स्वास्थ्य 0
एजेन्सी । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ७३४ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ७,३०४ पीसीआर परीक्षणमा ६५६ र २,७०९ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ७८ जना गरी ७३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १४१३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् र १२ जनाको मृ’त्यु भएको छ । हाल देशभर २४ हजार ३१३ जना सक्रिय संक्रमति रहेका छन् ।जसमध्ये २२ हजार ८६४ जना होम आइसोलेसनमा र १,४४९ जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् ।
को’रोनाका बि’रामीमध्ये ३९० जना आईसीयू र ११७ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत् छन् ।आइतबार थपिएसँगै नेपालमा को’रोना संक्रमितको कुल संख्या ७ लाख ८४ हजार ५६६ पुगेको छ । योसँगै नेपाल मृ’त्‍यु हुनेको संख्या ११ हजार ४० पुगेको छ भने ७ लाख ४९ हजार २१३ जना संक्रमणमु’क्त भएका छन् ।
यस्तै १० वर्ष मुनिका १४ बालबालिकामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ११ देखि २० वर्ष उमेर समूहका ६५ जना को’रोना संक्रमित थपिएका छन् ।
असोज ०४ गते सोमबार, हेर्नुहाेस् यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारकाे भाग्यफल
कोरोनाको कहर बागलुङमा पहिलेजस्तै फैलियो फेरि दोस्रो लहर
भारतवाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमलले कोरोना लिएर आएको पुष्टि